हामीले बितेको वर्षको समीक्षा गर्दै सरकारलाई पोहोरजस्तै, परारजस्तै वा सरारजस्तै यो वर्ष पनि असफल, भ्रष्ट र पत्रु नै प्रमाणित गरेर छाड्यौँ । त्यसमा पनि यसपालि सरकारलाई असफल घोषणा गर्न कोरोना महामारीले पनि राम्रो साथ दियो । सरकारलाई फेल पारिसकेपछि लकडाउनको यो छ्यालब्याल समयमा के गर्ने त भन्दै गर्दा मनमा एउटा प्रश्न आयो, ‘हैन, यो सरकार भन्ने चीज किन सधैँ फेल मात्रै हुन्छ ?’
हरेक नयाँ वर्ष लाग्दा हामी सधैँ सरकारलाई असक्षम, भ्रष्टाचारी, नालायक भनेर मूल्यांकन गर्छौं । यो काम पनि गरेन, त्यो काम पनि गरेन भन्छौँ । कामको नाममा सिन्कै नभाँचेको, भ्रष्ट भएको भनेर हामी गाली गर्छौं, सराप्छौँ, रिसाउँछौँ, दाह्रा किट्छौँ, बंगारा दुखाउँछौँ । धेर रिसाएर हामी कतिको रक्तचाप बढेर हृदयाघातसमेत हुन्छ । कति त सरकारलाई गाली गर्दागर्दै बूढा भएर मरिसके पनि । तर सरकारलाई बाह्र हातका टाँगाले पनि छुँदैन । कुनै पनि सरकारले कहिल्यै पनि आफू फेल भएको स्वीकार गर्दै गर्दैन ।
गहिरिएर विचार गरेपछि खास ज्ञान प्राप्त भयो । वास्तवमा सरकार त फेल भएको होइन नै रहेछ, हामी सरकारका विरोधीहरू पो फेल भएका रहेछौँ । हामी नै मूर्ख, अज्ञानी र असफल परीक्षार्थी रहेछौँ । खासमा हामीले सरकारसँग जे आशा गर्नुपर्ने हो, त्यो नगरेर अर्थोकै अपेक्षा गर्दा रहेछौँ अनि सधैँ फेल हुँदा रहेछौँ । धिक्कार हाम्रो बुद्धि !
लौ, अब आउँदो वर्षमा हामी सरकारबाट सहजै प्राप्त गर्न सकिने कुरा मात्रै अपेक्षा गरौँ त अनि कसरी फेल भइँदो रहेछ ! हामी आशा गरौँ– २०७८ सालमा जताततै भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार व्याप्त हुनेछ । मन्त्रीहरू एकपछि अर्को गर्दै विवादमा परेको परेकै गर्नेछन् । भ्रष्ट र नालायक मन्त्रीहरूले मन्त्रालयहरू चलाउनेछन् । आशा भरोसा गरिएका मन्त्रीहरू सबै पतन हुनेछन् । सरकार चलाउने पार्टीभित्रको किचलो अझै बढ्नेछ । एउटै पार्टीका युवाहरूबीच कुटाकुटदेखि काटाकाटसम्म हुनेछ । हुँदाहुँदै सत्ताधारी पार्टी यही वर्षभित्र फुटेर सरकार नै ढल्नेछ भन्ने अपेक्षा गरौँ ।
२०७८ सालमा भ्रष्टाचार, कमिसन र यौन काण्डका अडियो, भिडियोहरू अझ धेरै बाहिर आउनेछन् । महँगी र कालाबजारीले जनताको जीवन तहसनहस हुनेछ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा अपरिपक्व, मुखाले र कसैको कुरा नसुन्ने दुष्ट प्रवृत्तिका सल्लाहकारहरूको बिगबिगी हुनेछ । बालुवाटारमा भिजिलान्ते, दलाल र माफियाहरूको घेरा हुनेछ । सरकारी आयोजनाका ठेक्कापट्टा र टेण्डरहरू सबै मन्त्रीका छोरा, भाइ भतिजा, साला र चाटुकार एवं माफियाहरूले मात्र पाउनेछन् । वर्षभरिमा पाँच सात वटा होइन, महिनामै आठ दस वटा राष्ट्रिय काण्डहरू सिर्जना हुनेछन् ।
हो, यसरी यो सरकारले मुलुकलाई चौपट पार्नेछ भनेर आशा गर्‍यौँ भने हाम्रो अपेक्षा पक्कै पूरा हुनेछ । कदाचित् त्यस्तै वा अझ खराब भए पनि हामीले प्रक्षेपण गरेको लक्ष्य भेटेको सुखद अनुभूति हुनेछ । चित्त प्रसन्न हुनेछ । हाम्रो प्रेसर सन्तुलित हुनेछ । स्वास्थ्य सुध्रिनेछ । हामीले पूरा नहुने आशा गरेर आफ्नो स्वास्थ्य बिगार्नुभन्दा पूरा हुने सम्भावना भएका अपेक्षा गर्दा अर्को वर्ष सरकार पनि फेल हुनेछैन, हामी पनि फेल हुनेछैनौँ ।
लौ त, नयाँ वर्ष २०७८ मा तपाईंका सबै इच्छा पूरा होऊन्, हार्दिक शुभकामना !